Izinyanga zeSaturn: ziyini, zingaki futhi zibaluleke kangakanani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iplanethi ngayinye eyenza i- Uhlelo lomkhathi inesiphuphutheki esisodwa noma eziningi zemvelo ezizungeza indawo ezungezile. Amasathelayithi nawo anezici ezibalulekile eziwenza ahluke kwezinye izinto endaweni yonke. Kulokhu, sizokhuluma ngakho izinyanga zelanga. Kuneziphuphutheki zemvelo ezingaphezu kwama-50 ezizungeza le planethi, nokho zihlukaniswe ngamaqembu amaningi, okwenza kungabikho muntu owazi konke mayelana nezinyanga zeSaturn.
Yiziphi izinyanga ezibaluleke kakhulu kule planethi futhi ziyini izici zazo? Kulesi sihloko sizoxoxa ngokuningiliziwe konke lokhu.
1 I-Saturn nezici zayo
2 Izinyanga ze-saturn
3 Amaqembu eziphuphutheki
4 Izinyanga ezibaluleke kakhulu zikaSaturn
I-Saturn nezici zayo
Siyakukhumbula lokho Saturn Kuyiplanethi yezocansi yeSolar System ngokuya ngokusondela kweLanga. Ibekwe phakathi kwamaplanethi iJupiter ne-Uranus. Yiplanethi yesibili ngobukhulu kuSolar System. Inobubanzi obusenkabazwe obungamakhilomitha ayi-120.
Ngokuqondene ne-morphology yayo, icwecwe yizinti. Lokhu kuqunjelwa kungenxa yokuthi isivinini sayo sokujikeleza sishesha impela. Amabhande eringi ayabonakala eMhlabeni. Yiplanethi enakho kakhulu ama-asteroid uzungeza nxazonke. Njengoba kunikezwe ukwakheka kwayo kwamagesi kanye nenani eliphakeme le-helium ne-hydrogen, kungokweqembu lamagesi amakhulu. Ngenxa yelukuluku, igama layo livela kunkulunkulu waseRoma uSaturn.
Manje njengoba sesikhumbule kancane izici zeplanethi iSaturn, sizohlaziya konke mayelana nezinyanga zayo. Njengamanje, kuyaziwa ukuthi kunezinyanga ezingama-62. Lezi yizinyanga, kuze kube manje, eziqinisekiswe yisayensi. Zonke iziphuphutheki onazo zinezinhlobonhlobo, izakhiwo, nemvelaphi ehlukile. Ososayensi bacabanga ukuthi iningi lezinyanga zikaSaturn zafakwa futhi zathunjwa yiplanethi ngokushesha nje lapho zingena emkhakheni wamandla adonsela phansi weplanethi.
Ukuthi iplanethi ine-asteroid ezungeza yona akuyona nje enye yezenzo zamandla adonsela phansi. Uma iplanethi inkulu ngosayizi, iba namandla amakhulu amandla adonsela phansi ahehayo futhi angahlalisa isibalo esikhulu sama-asteroid azungeza iplanethi. Sikhuluma ngezinto ezinkulu. Iplanethi yethu inesathelayithi eyodwa ezungeza thina kuphela, kodwa inezinkulungwane zezingcezu zamatshe ezinamadwala nazo ezikhangwa insimu yethu yamandla adonsela phansi.
Inyanga ebaluleke kakhulu kaSaturn ibizwa ngeTitan. Impela wake wakuzwa ngaphambili empilweni yakho. Ibaluleke kakhulu ngoba inkulu kakhulu ohlelweni lweSaturn. Ngaphezu kwalokho, iyisathelayithi yesibili ngobukhulu kuyo yonke iSolar System ngemuva kukaGanymede (ingeyenye yeziphuphutheki zeplanethi iJupiter). I-Titan ithanda ukuba ibaluleke kakhulu ngoba ukuphela komzimba wasezulwini lapho kukhona khona imali eqinile.
Ezinye izinyanga zeSaturn zihlukaniswe ngamaqembu ahlukene, kuya ngezimpawu zazo zomzimba nezomzimba.
Sizokwehlukanisa amaqembu amakhulu lapho amasathelayithi ahlukene eplanethi iSaturn ahlukaniswe khona. Le sethi yama-satellites yaziwa njengohlelo lweSaturnine futhi ahlukaniswe ngokwezici zawo eziyinhloko. Ake sibone ukuthi ziyini:
I-Titan. Njengoba sishilo ngaphambili, iyisathelayithi ebaluleke kakhulu ngokwesayizi. Likhulu kangangokuba lifana neleplanethi. Akudluli neze iplanethi iMercury ngosayizi. Ububanzi bayo bungamakhilomitha ayizi-5.150 futhi buvelele ngomkhathi wayo. Inomkhathi ominyene impela futhi ukuphela kwayo onerekhodi.
Iziphuphutheki eziphakathi nendawo ezibandisiwe. Lawa masathelayithi ngosayizi ojwayelekile. Njengoba igama labo liphakamisa, zingama-satellites ambozwe ungqimba lweqhwa nemigodi ehlukahlukene. Lawa masathelayithi atholakele ngaphambi kweminye yemikhankaso eyenziwa ngezibonakude. Ezinye zezinto ezibaluleke kakhulu yilezi: I-Tethys, i-Dione, i-Rhea, i-Hyperion ne-Iapetus.
Iziphuphutheki zezindandatho. Iziphuphutheki zezingcingo yizo ezizungeza ngaphakathi kwezindandatho zikaSaturn.
Iziphuphutheki zomalusi. Imayelana nalabo abangaphandle kwamasongo. Ngenxa yomjikelezo wayo ingasiza ukuwahlelela futhi uwalinganise, kube sengathi bangabelusi. Phakathi kwabaziwa kakhulu sinendandatho ka-F, uPandora noPrometheus.
Iziphuphutheki zeTrojan. Lezi ziphuphutheki zizungeza ebangeni elifanayo ukusuka kuSaturn njengamasathelayithi amakhulu. Imvamisa iba cishe ngama-degree angama-60 ngaphambili noma ngemuva kwakhe. Sithola uHelena noPollux, phakathi kwalabo abavelele kakhulu.
Iziphuphutheki ze-Coorbital. Lezi yizo ezinolayini ofanayo ezizungezayo. Lokhu kuzenza zibe yiziphuphutheki ezisebenza futhi zihambe ngendlela yokuthi zingashayisani.
Iziphuphutheki ezingajwayelekile. Iqembu elikhulu lama-satellite, yize kukude kakhulu neSaturn. Zingaphakathi kwensimu yakho yamandla adonsela phansi.
Iziphuphutheki ezincane eziphansi. Yibo bonke labo abaphakathi kukaMimas ice cream no-Enceladus ice cream. Phakathi kwalezi zindlela ezimbili ze-satellite ezibandayo kukhona konke okuphansi.
Izinyanga ezibaluleke kakhulu zikaSaturn
Ake sibheke izinyanga ezibaluleke kakhulu zikaSaturn. I-Titan ibaluleke kakhulu kunakho konke ngoba inkulu futhi yakhiwe ngamanani amakhulu ama-hydrocarbon ne-hydrogen. Lokhu kubenza bazuze umbala ophuzi ngokwengeziwe. Cishe kungamakhilomitha ayi-1.222.000 ukusuka kuplanethi futhi uqedela uhambo lwayo lokujikeleza iplanethi yakho njalo ezinsukwini eziyi-16.
Ake siqhubekele kuRea. Ngenye yeziphuphutheki ezibaluleke kakhulu zeSaturn. Kuyingxenye yama-ayisikhilimu aphakathi nendawo. Ububanzi bayo bungamakhilomitha angu-1.530 futhi useduze. Kucatshangwa ukuthi isikhungo sayo sakhiwe ngamatshe futhi sinamanzi amaningi.
Ekugcineni, Enceladus ikleliswe endaweni yesithupha phakathi kweziphuphutheki ezinkulu zeSaturn. Inobubanzi bamakhilomitha angama-500. Kuyingxenye yeqembu lamasathelayithi aphakathi nendawo aqandisiwe. Uqweqwe lwawo lweqhwa lunikeza umbala omhlophe njengoba ukhombisa cishe i-100% yelanga eliyitholayo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezinyanga zikaSaturn futhi uthole okuningi ngale planethi enelukuluku.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Izinyanga ze-saturn